The Lord of the Rings: War dia manampy hetsika dimy hankalazana ny Krismasy | Vaovao iPhone
Ny mpamorona NetEase dia maniry mankalaza ity Krismasy ity miaraka amin'ny mpilalao rehetra avy amin'ny lohateny vaovao an'ny JRR Tolkien's The Lord of the Rings: War. Mandritra ireo andro ireo dia afaka mahazo valisoa maromaro isika amin'ny famahana piozila, filalaovana bingo na fitadiavana sari-tany izay, hoy izy ireo, manafina harena. Ireo hetsika rehetra ireo dia natao mba hidirana ao anatin'ny fanahin'ny fialantsasatra mandritra ireo andro ireo.
The Lord of the Rings: War dia hanolotra fitsidihana manokana ho an'ny mpankafy amin'ity vanim-potoana ity. Ho avy izy rehetra feno fanomezana isan'andro dia mandeha an-tserasera ny mpilalao, ka vao mainka mahafaly ny Fetiben'ny Yule.
Tsy latsa-danja ihany koa, i Bilbo dia mankalaza ireo andro ireo miaraka amin'ny azy piozila fanamby, izay ahafahan'ny mpilalao manandrana mamita valisoa bingo folo mba hahazoana tombony manokana amin'ny Bilbo's Riddles.
Amin'ny lafiny iray, ny mpilalao dia afaka mividy haingo amin'ny fampiasana tapakila haingo amin'ny Asio ilay hazo Yule goavambe ao Hobbiton ary mahazo valisoa fandrosoana haingon-trano.
Ho fanampin’izany, ho afaka hanokafana ny taom-baovao amin’ny alalan’ny a fety lehibe mandritra ny fankalazana ny afomanga ao Hobbiton ny 31 Desambra hatramin'ny 1 Janoary.
Vonona ny hiditra amin'ny fahafinaretana rehetra? Ny Tompon'ny peratra: Ady dia azo alaina amin'ny download IOS App Storeao amin'ny Fivarotana Galaxy ary ao amin'ny Google Play Store ho an'ny fitaovana Android.
Azo ampiasaina ho anao izy io misintona maimaim-poana tanteraka ary misy fividianana ao anatin'ny fampiharana. Raha tianao ny asan'i JRR Tolkien, inona no andrasanao hanandrana ity lohateny ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » The Lord of the Rings: War dia manampy hetsika dimy hankalazana ny Krismasy
Ny Apple Watch sasany dia manana olana momba ny fiampangana rehefa avy nanavao ny watchOS 8.3
Ny iPhone dia nohamafisina ho finday 5G lafo indrindra eran-tany ary mahazo tombony be indrindra